You are here: Home somal Wasiirka Ciyaaraha Somaliland Oo Abaal-marino Qaaliya Guddoonsiiyey Orodyahano Kaalmaha Hore Ka Galay Tartan Orod Oo 10km Ah
Taratankan orodka ah oo ay ka qeyb-galeen in ku dhaw 150 orod yahan ayaa loogu magac-daray Dhiiri-gelinta Nabad-gelyada, waxaana uu ka soo bilawday duleedka Kaantaroolkii hore ee galbeedka Hargeisa kaas oo aakhirkiina ku soo dhammaaday Beerta Xorriyadda. Tartankan orodka oo ahaa mid aad u xiiso badan oo la arkayay dadwayne aad u tiro baddan oo tuban wadada hareeraheeda kuwaasi oo ka -
Tatankan ayaa waxa ku guulaystay oo kaalinta koowaad galay orod yahan ka socday gobollka Awdal, halka uu kaalinta labaad ka galay orod yahan ka socday gobollka Maroodi-Jeex, kaalinta saddexaadna waxaa galay orod yahan isna ka socday gobollka Awdal. Guud ahaan orod yahani kaalmaha hore ka galay tartankan oo dhamaa 9-orod yahan ayaa abaal-marino qaali ah uu guddoonsiiyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Md. Axmed Cabdi Kaahin, waxaana uu ku hambalyeeyay ciyaartoyda guuleystay dedaalka ay la yimaadeen, halka uu ku guubaabiyey orod yahanadii kale inay tartamadda kale ay dedaal la yimaadaan.
Waxaana wasiirka hadaladiisi ka mid ahaa “Waxaan ku faraxsanahay inaynu maanta qabano tartankan quruxda badan ee orodka 10km ah, oo runtii aan uga mahad-celinayo xidhiidhka ciyaaraha fudud sida wacan ee ay u soo qaban-qaabiyeen. Orodku wuxuu ka mid yahay ciyaaraha aynu hibada u leenahay ee ay tahay inaynu ku dedaalno oo aynu yeelano ciyaartoy badan oo dunida ka muuqda sida Mo Farah oo kale, maanta runtii aniga iyo wasaaraddaba waxay noo tahay farxad weyn, xattaa annaga ayaa ka qeyb-galnay orodkii oo waad arkayseeno kaalinta koowaad ayaan galay. Waxaan u mahad-naqayaa cidkasta oo nagala qeyb-qaadatay tartankan oo ay ugu horeeyaan ciidanka Booliska oo intii tartanku socday noo suurto-geliyay inay wadooyinka ka celiyaan gaadiidka”.
Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guudoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud Mr. Mustafe Cali Nuur, Agaasimaha waaxda ciyaaraha Mr. Maxamed Nuux Jibriil iyo Agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Md. Maxamed Xuseen Axmed Dhabeeye, waxaana si isku mid ah ay u soo dhaweeyeen tartankan orodka 10km ah.